Maleeshiyaad Deegaanka Ceel Cali Mire ku Afduubtay Gaari Ambulace ah – Radio Muqdisho
Maleeshiyaad Deegaanka Ceel Cali Mire ku Afduubtay Gaari Ambulace ah
War Goordhow naga soo gaaray Magaalada Dhuusa Marreeb ee Gobolka galgaduud ayaa sheegaya in rag loo maleynayo inay ka tirsan yihiin kooxda Alshabaab ay Afduubteen gaari Ambulace ah oo loogu adeegayay dadka Magaalada.
Wariyaha warbaahinta Qaranka uga soo warrama Gobolka Galgaduud Maxamed Cabdi Maxamed ayaa qadka Taleefoonka inoo ku sheegay in Cisbitaalka Magaalada ay soo weceen rag iska dhigaya in gurmad caafimaad loo sameeyo kaddibna maamulka Cisbitaalka uu u diray dadkaas Gaari Ambulace ah oo lagu daray mid ka mid ah kal-kaaliyasha caafimaadka, markii ay gaareen deegaanka Ceel Cali Mire oo qiyaastii Magaalada u jira 7 km ayuu wariyuhu sheegay in ay afduubteen rag gaarayay 7 maleeshiyaad ah.
Si doo kale dadka deegaanka ayaa ku warramaya in ay raggaan muddo ay sugayeen gaariga markii uu yimidna ay wateen.
Maamulka Magaalada Dhuusa Marreeb ayaa wali wada Baaritan ku saabsan waxa ay yihiin dadkaan afduubta Gaariga.
Wixii warar ah ee Arrintaan la xiriira Dib kala socda Akhristayaal
Wasaaradda Beeraha oo Horumarinaysa Tayada Beeralayda dalka